Umqoqi wesampula wamathe alahlwa kwi-Wholesale (COVID-19 TEST) Ukukhiqiza kanye Nemboni |Fanttest
疫情可控:可 通过 个人 自主 或 企业 集中 唾液 送 权威 机构 机构 机构 机构 因 操作 不当 导致检测控制疫情蔓延。
9. 结束录音并关闭 uhlelo lokusebenza,将樜品放入盒子中并用密封贴纸密封.
1. Uhlelo luzenzela ngokuzenzakalelayo ibhakhodi, engacindezelwa futhi ibethelwe futhi ithunyelwe kubakhiqizi, kuyilapho izuza ibhakhodi eyodwa yomkhiqizo owodwa.
2. Ngokusho kwebhakhodi yomkhiqizo, yonke inqubo ingalandelelwa futhi ilawulwe.
3. Sinikeza ukuxhumana kwedatha.Ingase futhi ithuthukiswe ngokwezidingo zekhasimende ukuze ixhumane nezinye izinhlelo zokuphatha ezifana nerejista ukuze kuqedwe amasheke angekho.
1. Izibhedlela zinegunya elifanele, iphasiwedi ye-akhawunti.
2. I-akhawunti yokungena - scan ikhodi ukuze uthole umphumela wokuhlolwa.
3. Sihlinzeka ngoxhumano lwedatha, olungathuthukiswa ukuze luxhumane nezinye izinhlelo zokuphatha isibhedlela uma ikhasimende lifuna.
1. Izinketho zokusebenzisa izilimi eziningi.
2. Abasebenzisi bangalayisha ividiyo ukuze bathole imibiko enemininingwane, Uma umsebenzisi engayilayishi ividiyo, kungatholakala umphumela omfishane.
Izindleko zokuqalisa uhlelo lokusebenza, izindleko ezengeziwe zokuthuthukisa isofthiwe nezindleko zokwakha iseva zisohlangothini lweklayenti.
Okwedlule: I-Virus Neutralization ye-SARS-CoV-2 Test Cassette colloidal Gold Method
Olandelayo: I-Adeno/Rota Antigen Rapid Test
Iziyalezo zokuqoqa amathe
Ikhithi yokuqoqa amathe
Ishubhu yokuqoqa amathe
I-Tube yokuqoqwa kwamathe Inani
Ikhithi Yeqoqo Le-Saliva Dna
Ukuhlolwa Kwezidakamizwa Zamathe
Ukuhlolwa kwezidakamizwa zamathe Thc
Iqoqo Lesampula Lamathe
Ikhithi yokuqoqwa kwesampula yamathe